Danyar deeq Afur ah loogu sameeyay Muqdisho – Radio Muqdisho
Danyar deeq Afur ah loogu sameeyay Muqdisho
Hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka ayaa howlo afurin ah kawadda qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir, Iyadoo degmada Cabdullcasiis howlo afurin ah xalay ugu sameysay dad danyer ah.
Cali Daacad Cabdulle oo wakiil ka ah hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta yaa sheegay in 17’ka degmo ee gobolka Banadir laga wado howlo Afurin ah isla markaana loogu talagalay howshaan inay ka faa’iidaystan dadka Danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha degmada Cabdullcasiis Cismaan Muxudiin Cali Cariif oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay Madaxda hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta isagoo ballan qaaday in cidwalba oo taageeraysa dadka danyarta ah sadaqada ay soo dhiiban sidii loo baahnaa Danyarta loo gaarsiin doono.
Hay’adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta iyo Hay’ad kale oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa muddooyinkaan waday qorshayaal lagu afurinayo dadka Danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho islamarkaana haysan inay iska bixiyaan adeegyada aas-aaska u ah nolosha inta lagu guda jiro Bisha Rammadaan.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan” waa inaan ka hortagnaa in odayaasheenna horteenna lagu dilo
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan" waa inaan ka hortagnaa in odayaasheenna horteenna lagu dilo